कर्णाली | नेपालन्युज
प्रधानमन्त्री देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच चुनावबारे छलफल
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। सोमबार दिउँसो भएको भेटमा आगामी स्थानीय चुनाव लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ।
अप्पर अरुण र ईखुवा खोला जलविद्युतका निर्माणमा स्थानीयबासीको राय माग
शुक्रबार , ०५ कार्तिक , २०७८
संखुवासभामा निर्माणको क्रममा रहेको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना र ईखुवाखोला जलविद्युत आयोजनाका लागि बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पास गर्ने क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थानीयबासीसँग राय माग गरेका छन् । निर्माण कम्पनीले पेश गरेको कागजातमा स्थानीयबासी सहभागिता जनाउनका लागि मन्त्रालयले कात्तिक ४ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गरी राय माग गरेको हो ।
बुधबार , २७ आश्विन , २०७८
नेपाल टेलिभिजनमा रहँदा नीर शाह विरुद्ध कसले किन रच्यो षड्यन्त्र?
सोमबार , २५ आश्विन , २०७८
नेपालमा टेलिभिजनका संस्थापक जसले फिजीमा समेत टेलिभिजन सुरु गर्न योगदान गरेका थिए।
पासाङ ल्हामु शेर्पा (अकिता) जसले राष्ट्रिय विभूति पासाङकै पथलाई पछ्याउँदैछिन् (भिडियो वार्तासहित)
आईतवार , २४ आश्विन , २०७८
उस्तै नाम हुनु र एउटै पेशाकर्ममा हुनु एउटा संजोग नै हो भन्दा फरक नपर्ला ? यस्तै संजोग राष्ट्रिय विभूति पासाङ ल्हामु शेर्पा र आरोही गाइड पासाङ ल्हामु शेर्पामा भएको छ ।
धनुषामा एकै परिवारका ३ जनाको शव भेटियो
शनिबार , २३ आश्विन , २०७८
धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा एकै परिवारका तीन जनाकाे शव फेला परेकाे छ।
सरकारमा सहभागी श्रीमानहरुले गठबन्धनका मुद्दा हेर्न मिल्छ ?
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले गठबन्धन सरकार बनाइदिएको तीन महिनापछि मात्र शुक्रबार सरकारले पूर्णता पायो। सरकारमा सार्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि भागबण्डा पाए। परमादेश दिने ५ जना न्यायाधीशलाई क्याविनेटमा मन्त्रीदेखि राजदूत र संवैधानिक अंगहरुमा भगबण्डा गरिएको तथ्य खुलेर बाहिर आयो।
कांग्रेसलाई कम्युनिस्टको काँध थापेर जान दिन्नौं : लोकेश ढकाल
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट यो आएको छैन। सत्तागठबन्धन दल त्यसमा पनि नेकपा माओवादीका सुप्रिम कमरेड प्रचण्डले पटक-पटक भनिरहेका छन्। नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको दल नेकपा समाजवादी दलका नेताहरुले निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन टुट्नु हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
कोरोना महामरीका कारण दुई वर्ष देखि थलिएको पर्यटन क्षेत्रले कोरोना संक्रमणको दर कम भएसँगै चहलपहल हुन थालेको छ । अघिल्लो तीन महिनाको तुलनामा पर्यटक आगमनको दर दोव्वरले बृद्धि भएर सेक्टेम्बरमा मात्र ९९९८ पुगेको छ ।
महाधिवेशनले नेकपाको राजनीतिक विरासतमा नयाँ एमाले बनायो : मणि थापा
प्रचण्डसँग? यो त सम्भव देख्दिनँ म। प्रचण्ड र ओली कमरेडको नेतृत्वमा पार्टी हुञ्जेल फेरि मिल्ने सम्भावना देख्दिनँ। त्यो दूरी निकै लामो भैसक्यो। बरु विप्लवले अहिले क्रान्तिकारी धार भनेर हिँड्नु भएको छ।